Steam Deck: zvinhu gumi zvaunofanira kuziva nezve iyo Valve koni | Linux Vakapindwa muropa
Inopfuura mwedzi miviri nehafu yapfuura, Valve yakaunzwa la Steam dhizaini. Pakutanga isu tese takafunga kuti ichave inotakurika koni yekushandisa pane Steam, asi pakupedzisira iri yakawanda kupfuura iyoyo. Nechikonzero ichi, iyo € 419 yavanokumbira hausi mutengo wakakwira, uye zvakanyanya kana tichifunga izvo tinogona kuisa akasiyana masisitimu anoshanda uye shandisa sekuti yaive komputa, ichichengetedza madaro.
Ko inogona kushandiswa semhando yekombuta kadiki Shongwe muenzaniso wakanaka kwazvo zvekuti unofanirwa kuongorora zvakadzama kuti uzive icho chishandiso, software kana chero chatiri kutaura nezvacho chingaite. Muchikamu chino ticha taura nezve gumi zvinhu zvekuziva nezve iyo Steam Deck, kunyangwe isu tambotaura nezve mamwe mapoinzi, sekukwanisa kuisa akasiyana masystem.
1 Kutonhodza zvinhu nezve iyo Steam Deck
2 Proton nemitambo kunze kweSteam
3 Inowanikwa yekisimusi
Kutonhodza zvinhu nezve iyo Steam Deck
Tsigiro yemhando dzakasiyana dzekushandisa. Nokusingaperi, "koni" yakaisa vhezheni itsva yeSteamOS yakavakirwa paArch Linux uye nePlasma, asi mamwe masisitimu anoshanda anogona kuiswa, akadai seWindows. Unogona multi-bhutsu uye sarudza iyo system yaunoda kana uchitanga chishandiso.
Tsigiro yeVirtual Reality (VR). Kunyangwe isinga gadziriswe yechokwadi chaiyo, iyo Steam Deck inotsigira VR zvishandiso zvePC. Kutamba iyi mhando yezvinyorwa zvinoda yakanaka GPU, iyo inotisvitsa kune inotevera poindi.
Hazvitsigire zvekunze maGPU. Kubatanidza koni kune yekunze GPU kunoda chiteshi cheThunderbolt 3, uye iyo Steam Deck haina kana chimwe cheizvi. Ehezve, iyo "koni" ine Hardware iyo inokutendera iwe kufambisa rinenge chero chero zita zviri nyore.
Haptic chiitiko. Pazasi pega rega rekubata pane injini yeRRA, iyo inotipa imwe haptic mhinduro mune mimwe mitambo. Zvinotarisirwa kuti kuchave nekudengenyeka nekuvhunduka, asi kwete kuti zvichave zvakanaka senge mune mamwe maturusi akadai saSony kana Nintendo.
Tsigiro yemaakaundi mazhinji eSteam. Semu PlayStation, semuenzaniso, tinogona kugadzirisa uye kusarudza akati wandei maStam account, kana nemamwe mazwi, tinogona kushandisa akasiyana profiles. Iri ibasa rinodiwa mune chero timu, uye zvimwe mune izvo isu zvatinogona kugovana neshamwari kana mhuri.
Proton nemitambo kunze kweSteam
Proton API. Mazhinji mitambo yeSteam ndeyeWindows, asi ese mavhezheni eSteamOS, kusanganisira iyo iri paStam Deck, akavakirwa paLinux. Kuvandudza kuenderana uye nekatalog, iyo "koni", iyo yatichagara tichiisa makotesheni nekuti inopfuura iyo, inoshandisa Proton, inoitirwa kukwanisa kumhanyisa mitambo yeWindows paLinux-based system. Hazvizoshanda zvese kana kukwana, asi pachave nemazita anowanikwa asingakwanise kuwanikwa neimwe nzira.
Mazita asiri eSteam achange achitamba. Yakanangana nepfungwa yapfuura, Proton inokutendera iwe kutamba mazita asiri paStam. Valva inovimbisa kuti pane sarudzo "Wedzera mutambo" mune ino SteamOS yekoni iyo yatinogona kuwedzera mitambo kubva kune mamwe matsigiro akatsigirwa. Dambudziko nderekuti mamwe mazita, seyakakurumbira Fornite, shandisa anti-cheat system isiri Linux yakagadzirira, saka unogona kusangana nematambudziko… izvozvi.
Inowanikwa chete online, zvirinani pakuvhurwa. Sezvakaita Raspberry Pi uye imwe Hardware, pakutanga isu tinongogona chete kutenga iyo Steam Deck kubva kuValve peji, asi munguva pfupi tinozozvionawo muzvitoro zvepanyama. Izvo zvinosimbiswa ndezvekuti ichatengeswa mune yechitatu-bato online zvitoro gare gare.
Nguva dzose kuita kumwe chete. Iyo Steam Deck inogona kushandiswa seinotakurika koni kana kushandiswa se "doko" kana mini komputa. Zvimwe zvinotakurika zvinyaradzo zvinogona kusunganidzwa kumahwindo makuru zvinoita zvakasiyana, asi izvo hazvizove zvakadaro neValve. Izvo hazvina basa kuti takabatana papi kana iri kudhonza bhatiri; zvichagara zvakafanana.
ext4 Kadhi re SD. Kana uchishandisa SteamOS, iyo kadhi fomati inofanira kunge iri ext4.
Kune mamwe mavhidhiyo padandemutande revanhu vakaedza iyo Steam Deck, asi vanobva kuvanyanzvi vakaigamuchira kuti vadzokorore uye, sezvinei, kuisimudzira. «Console», iyo inogona kutochengeterwa kubva ku chitoro chepamutemo, ichaenda kutengeswa kutenderera mwaka wezororo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam Deck: zvinhu gumi zvaunofanira kuziva nezve Valve's console
Asina-fungible tokeni. Zvinodikanwa zvekusika nemaitiro